တောရှောက်ခါး - ဝီကီပီးဒီးယား
တောရှောက်ခါး ၏ ရုက္ခဗေဒအမည်မှာ Citrus hystrix DC., Rutaceae ဖြစ်သည်။ လူသိများသည့်အမည်မှာ kaffir lime ဖြစ်ပြီး combava ၊ kieffer lime ၊ limau purut ၊ makrut lime, Kabuyao (Cabuyao) ဟုလည်း နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
တောရှောက်ခါးပင်၏ မူလဇာတိမှာ လာအို၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း နှင့် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင်သာမက ကမ္ဘာအနှံ့အပြားနေရာများတွင် တောရှောက်ခါးကို အစားအသောက်များ ချက်ပြုတ်ရာတွင် အသုံးပြုကြသဖြင့် အိမ်နောက်ဖေး မြေကွက်လပ်တွင် စိုက်သော အပင်ဖြစ်သည်။
တောရှောက်ခါးသီး၏ အပြင်ဘက်အခွံသည် အစိမ်းရောင်ရှိပြီး ကြွက်နို့ အသားမာတက်သကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းသည်။ တောရှောက်ခါးအရွက်သည် အနံ့မွှေးသည်။ တောရှောက်ခါးပင်ကို မြေပန်းအိုးထဲတွင်လည်း စိုက်နိုင်သည်။ တောရှောက်ခါးသီးသည် ၄ စင်တီမီတာခန့်အရွယ်ရှိသည်။
လာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် တောရှောက်ခါးအရွက်ကို အသုံးပြုကြသည်။ တုမ်ယမ်(tom yum)ဟင်းချက်ရာတွင် တောရှောက်ခါးရွက်ကို အသုံးပြုကြသည်။ ကမ္ဘားဒီးယားနိုင်ငံတွင် Kruengဟင်းအနှစ်ပြုလုပ်ရာတွင် တောရှောက်ခါးရွက်ကို အသုံးပြုသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဘာလီနှင့် ဂျာဗား ဒေသတို့တွင် sayur asam ဟင်းချက်ရာတွင် တောရှောက်ခါးရွက်ကိုတွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။ ထိုဒေသများတွင် ကြက်သားဟင်းနှင့် ငါးဟင်းတို့ချက်ရာတွင် ကရေဝေးရွက်နှင့်အတူ တောရှောက်ခါးရွက်ကို ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ် အသုံးပြုသည်။ မလေးရှားနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း တောရှောက်ခါးပင်များကို တွေ့ရှိရပြီး ဟင်းချက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းဆေးဖော်စပ်ရာတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြသည်။ တောရှောက်ခါးရွက်ကို အခြောက်လှန်းထားပြီး ကြာရှည်လည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် တောရှောက်ခါးသီးအရည်နှင့် အသီးအခွံမာကို ဆေးဖော်စပ်ရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။ အသီးအခွံမှ ထုတ်လုပ်သော ဆီမှာ ကပ်ပါးရောဂါပိုးမွှားများကို သေစေနိုင်သည်။ တောရှောက်ခါးသီးအရည်မှာ အက်ဆစ်ဓာတ်ပါဝင်သော အချဉ်အရသာဖြစ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် အဝတ်အထည်များနှင့် ဆံပင်ကို သန့်စင်ရာတွင် အသုံးပြုကြသည်။
Citrus hystrix Kabuyao(Cabuyao) fruit (left), used in Southeast Asian cooking, with galangal root.
Kaffir lime leaves are alsoapopular ingredient in South East Asian cooking, such as Indonesian, Laotian, cambodian and Thai (มะกรูด).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောရှောက်ခါး&oldid=298781" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၆၊ ၀၄:၄၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။